Orinasa mpamatsy gazy CO2, mpamatsy - Sina CO2 mpanamboatra solika gazy
Ny fianakavian'i SDG11DF42 manana sensor thermopile tafiditra ho an'ny NDIR (detection gas infrared) dia sensor thermopile fantsona misy fantsom-pifandraisana izay mifanitsy mivantana amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Ny sivana fandefasana tarika tery infrared eo alohan'ny sensor dia mahatonga ilay fitaovana ho mora tohina amin'ny fifantohana entona lasibatra. Ny fantsom-pahalalana dia manome onitra ny fepetra rehetra azo ampiharina.
Ny SDG11DF42 misy karazana chip sensor sensor thermopile CMOS vaovao dia misy fahatsapana tsara, coefficient ny mari-pana kely amin'ny mari-pahaizana ary koa ny fitomboana ambony sy ny fahamendrehana. Ny puce referrer thermistor avo lenta dia natambatra ihany koa ho an'ny fanonerana mari-pana manodidina.
Ny fianakavian'i SDG11DF42G1 manana sensor thermopile tafiditra ho an'ny NDIR (detection gas infrared) dia sensor thermopile fantsona misy fantsom-pifandraisana izay mifanitsy mivantana amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Ny sivana fandefasana tarika tery infrared eo alohan'ny sensor dia mahatonga ilay fitaovana ho mora tohina amin'ny fifantohana entona lasibatra. Ny fantsom-pahalalana dia manome onitra ny fepetra rehetra azo ampiharina.
Ny SDG11DF42G1 misy karazan-tsivana sensor thermopile CMOS mifanentana vaovao dia manana fahatsapana tsara, coefficient ny maripana kely amin'ny fahatsapana ary koa ny reproducibility ambony sy ny fahamendrehana. Ny chip ASIC AFE (Analog Front End) dia ampifandraisina amin'ny sensor thermopile, manome tombony 1000 ho an'ny fantsom-panafody kely an'ny sensor thermopile. Ny voltam-pandefasana offset dia ampidirina ao amin'ny input sensor. Ny valin'ny output sensor dia azo ovaina mivantana amin'ny alàlan'ny ADC, izay manaloka ny amplifier Zero-Drift ary ny circuit DC-DC. Ny puce referrer thermistor avo lenta dia natambatra ihany koa ho an'ny fanonerana mari-pana manodidina.
Ny fianakavian'i SSG11DF42 misy sensor thermopile tafiditra ho an'ny NDIR (detection gas infrarede) dia fantsom-panafody thermopile fantsona iray manana herinaratra famantarana fivoahana mifanaraka amin'ny herin'ny taratra infrared (IR). Ny sivana fandefasana tarika tery infrared eo alohan'ny sensor dia mahatonga ilay fitaovana ho mora tohina amin'ny fifantohana entona lasibatra. Ny SSG11DF42 misy karazana sensor CMOS thermopile mifanentana amina karazana CMOS dia misy fahatsapana tsara, coefficient ny mari-pana kely amin'ny mari-pahaizana ary koa azo hamokarana ambony sy azo itokisana. Ny puce referrer thermistor avo lenta dia natambatra ihany koa ho an'ny fanonerana mari-pana manodidina.